You na-aga ịzụta ihe iMac 5k? Mụta maka ọdịiche dị n'etiti ihe 2015 na 2017 | Esi m mac
You na-aga ịzụta ihe iMac 5k? Mara ọdịiche dị n'etiti ụdị nke 2015 na 2017
Ọnye na -bụ Javier Porcar? | | iMac, Nkuzi, ọtụtụ
Mgbe anyị na-ekwu maka Mac nwere arụmọrụ dị elu, anyị kwesịrị iburu n'uche iMac 5k nke bịarutere na 2015. Ọbụna karịa, akụkụ nke ọrụ anyị ma ọ bụ ihe omume ntụrụndụ anyị gụnyere idezi foto ma ọ bụ vidiyo. The iMac 5k nke pụtara na nke mbụ ya na 2015, gosipụtara akara maka kọmputa kọmputa dị elu, na n'ezie, nkume mbụ nke kọmputa ndị dị ike nke Apple na-egosi anyị kemgbe ngosi nke MacBook Pro ikpeazụ ọdịda . N'ezie, ruo mgbe anyị nwetara iMac Pro na ọnwa ole na ole sochirinụ, nke a bụ iMac kachasị ike n'ahịa.
Na ntule a, anyị ga-amata arụmọrụ nke usoro 2017, nke ewepụtara na WWDC na 2017 na ụdị 2015, nke mere na ị nwere ihe ọmụma na ụkpụrụ niile ị nwere mmasị ịzụrụ, ọbụlagodi mgbe Apple na-ere ihe 2015 na oke ego.
Ka anyi bido n’èzí. Externally ma iMac bụ yiri, ma e wezụga n'ihi mgbanwe nke ọdụ ụgbọ mmiri Thunderbold 2 nke na-ewuli otu 2015, ma e jiri ya tụnyere Thunderbold 3 na njikọ USB-C nke ụdị 2017. Antụle ọdịiche a pụtara okpukpu abụọ nke nnyefe nnyefe, ruo 40 Gb / s na ohere nke ijikọ ọtụtụ ngwaọrụ, ruo nyocha 5k ọzọ ma ọ bụ ọbụna 2 nwere ogo 4k.
Anyị na-abanye n'ime igwe a pụrụ iche. Modelsdị abụọ ahụ nwere Intel i7 processor, onye kachasị elu n'oge ahụ. N'ezie, n'ime 2015 anyị nwere igwe Sky Lake na 4.0-4.2 GHz, mgbe Versiondị 2017 na-agba ịnyịnya Kaby Lake na 4.2 ka 4.5 GHz.
Ma ka anyị lee benchmark na-eji Geekbench 4: Ihe dị iche na-atụgharị na 9% na otu isi na 16% na-eji ọtụtụ isi. Nsonaazụ emere na igwe abụọ ahụ bụ 5.263 na 16.975 maka ihe atụ 2015, ebe usoro nke 2017 na-enye 5.736 na 19.774 n'otu n'otu.
Site na iji ubochi kwa ubochi, Mac 2017 di ocha ma dikwa nkiti. Onye ofufe ahụ na-agbanye ntakịrị ntakịrị karịa ụdị 2015, nke sụgharịrị gaa na kpo oku karịa. Ọ bụrụ na a kpo oku sụgharịta n'ime obere slowdown nke kọmputa, ikekwe anyị na-ahọrọ a mma ofufe, na-eme ka ọtụtụ n'ime arụmọrụ nke iMac.
Na nkenke, anyị nwere ndị otu egwuregwu yiri nke a. Ọ ga-adị mfe iji uru nke ndị otu 2017, ebe ọ na-ebuli ihe ndị ọzọ dị ugbu a, ya mere, na tiori, Mac a ga-anagide oge nke oge. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọghị ọnụego nnyefe dị elu ma ọ bụ njikọ nke ihe nlele nke mpụga nwere nnukwu atụmatụ, iMac nke 2015 ga-emezu ihe ịchọrọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mac kọmputa » iMac » You na-aga ịzụta ihe iMac 5k? Mara ọdịiche dị n'etiti ụdị nke 2015 na 2017
Arụpụtaghị ihe na ọkwa kachasị elu na Mac gị na ngwa a na-ere maka obere oge
Gụọ faịlụ Windows ọ bụla na Mac gị na DocumentReader 3